Igbo, John: Lesson 044 - Jizọs nyere ndị mmadụ nhọrọ, "Nabata ma ọ bụ jụ!" (Jọn 6:22-59) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 044 (Jesus offers people the choice)
41 Ya mere ndi-Ju tamuru ntamu bayere Ya, n'ihi na Ọ siri, Mu onwem bu nri nke siri n'elu-igwe ridata. 42Ha we si, Ọ bughi Jisus, bú nwa Josef, Onye ayi mara nna-Ya na nne-Ya? Oleezi otú o si kwuo, 'Esi m n'eluigwe bịa?'"
Jon onye na-ezisa ozi ọma kpọrọ ndị Juu Galile n'agbanyeghị na ha esiteghị n'ìgwè ndị a, mana ka ha jụrụ mmụọ Kraịst, ha adịghị mma karịa ndị Juu na ndị bi na ndịda.
43 Ya mere Jisus zara ha, si, Unu atamu ntamu n'etiti onwe-unu. 44 Ọ dighi onye ọ bula puru ibiakutem, ma ọ buru na Nna Nke ziterem adọghi ya, mu onwem gēme kwa ka o si n'ọnwu bilie n'ubọchi ikpe-azu. 45 Edewo ya n'akwukwọ ndi-amuma, si, Chineke nile gēzí ha nile: n'ihi nka onye ọ bula nke nuru site n'ọnu Nnam, nke nānu kwa, nābiakutem. 46 Ọ bughi na madu ọ bula huru Nnam, ma-ọbughi onye sitere na Chineke. Ọ hụla Nna.
Jizos anwaghi akowa ihe omuma nke omumu ya nye ndi choro ya n'ihi na ha agagh ekwe. Anyị enweghịkwa ike ịmata na chi nke nwoke ahụ bụ Jizọs bụ chi nke anyị, ọ bụ naanị site na ịmalite mmụọ nke Mmụọ Nsọ. Onye ọ bula nke nābiakute ya n'okwukwe gāhu ya, mara kwa ezi okwu-ya.
Jizọs machibidoro ìgwè mmadụ ahụ ịtamu ntamu megide mkpughe Chineke. Mkpụrụ mmụọ ahụ na-anụ ihe ọ bụla banyere Alaeze Chineke, ma onye na-azụ ma na-eche ahụmahụ ndị dị ya mkpa bụ ịhụnanya Chineke.
Chineke n'ime ịhụnanya a na-adọta ndị mmadụ n'ebe Jizọs bụ Onye Nzọpụta nọ, na-achọ ìhè ha ma na-akụziri ha n'otu n'otu, ka anyị na-agụ na Jeremaịa 31: 3. N'elu agba ohu abugh uche ma obu uche madu nke neweta okwukwe; kama ọ bụ Mmụọ Nsọ na-enye anyị ìhè, na -emepụta n'ime anyị ndụ Chineke maka anyị ịghọta na Chineke dị ike bụ n'ezie Chineke na Nna anyị. Ọ na-akụziri ụmụ ya ihe, ma na-eme ka mmekọrịta ha na ha nwee mmekọrịta. Ọ na-eme ka okwukwe dịrị n'ime obi anyị site na ịkpọ òkù nke Mmụọ Nsọ. Ndi ama okot utot emi ke akọnuche fo? Ị na-emeghe ihu n'ịhụnanya nke Chineke?
Mmụọ nke Nna na-eduga anyị na Jizọs ma kpalie anyị n'ebe ọ nọ. Ọ na-akpali anyị agụụ maka ya ruo mgbe anyị ga-aga izute Jizọs ma hụ ya n'anya. Ọ nabatara anyị dị ka anyị dị, ma ọ bụghị chụpụ anyị, na-enye anyị ndu ebighi ebi ka anyị wee nwee ike nke mbilite n'ọnwụ iji banye n'ebube Nna ya.
Otú ọ dị, e nwere ihe dị iche n'etiti Jizọs na onye kwere ekwe ọzọ a mụrụ. Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke, ma-ọbughi Ọkpara-Ya. Ya na Nna ya nọ site nmalite wee hu ya. Nna na Ọkpara enweghị ike ịkọwa. Jizọs na-ekere òkè n'udo n'eluigwe nakwa n'àgwà nile nke Chineke.
47 N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nēkwere na Mu nwere ndu ebighi-ebi. 48 Abụ m achịcha nke ndụ. 49 Nna-unu-hà riri manna n'ọzara, ha we nwua. 50 Nke a bụ achịcha ahụ nke si n'eluigwe bịa, ka onye ọ bụla wee rie ya ma ghara ịnwụ.
Mgbe o kwusịrị ịdị n'otu ya na Nna na ọrụ nke Mmụọ na ndị na-ege ya ntị, Jizọs gosipụtara eziokwu nke ihe bụ isi ya ka ha tụkwasị ya obi. Ọ kọwara nkenke nke Ndị Kraịst n'ụzọ dị mkpirikpi: Onye kwere na Jizọs na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Eziokwu a bụ mmesi obi ike na ọnwụ apụghị ịkagbu.
Jizọs dị ka achịcha si n'aka Chineke ruo ụwa. Dika achicha ahu adigh adi ka o ji aka ya nebe ihe iriba ama nke inye ndi mmadu ise, otua ka Jisos mejuru maka mkpa nke uwa n'oge nile, n'ihi na nime ya ka oke Chineke zuru. Site na ya ị na-enweta olileanya, ọṅụ na ngọzi. Na okwu, ọ na-enye ndụ ụwa ndụ Chineke, ma ụwa jụrụ ya.
Manna nke na-agbadata n'ọzara bụ onyinye si n'aka Chineke; ndokwa a dị ntakịrị. Ndị niile riri ya nwụrụ. Ya mere, anyị na-ahụ ọrụ ọrụ ebere, ọganihu ndị ọkachamara na nchọpụta sayensị, na ha na-enyere aka ruo oge ụfọdụ na n'akụkụ ụfọdụ. E nweghị ngwọta maka ọnwụ na njirimara ndị a ma ọ bụ merie mmehie. Ma onye ọ bula nke nānara Kraist agaghi-anwu. Nke a bụ nzube Kraịst, na-abịa ma bie n'ime gị. Ọ na-achọ ibi n'ime gị onwe gị, ka mmụọ ọ bụla ghara ịchịkwa gị. O nwere ike iwepụ ọchịchọ ọjọọ niile ma mee ka egwu gị kwụsị, nakwa ka ike gị ghara iwusi ike. Ọ bụ achịcha Chineke nyere gị. Rie ma dịrị ndụ, ka ị ghara ịla n'iyi dị ka ndị mmehie ọzọ.
Page last modified on March 05, 2020, at 06:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)